ExactSpy-Cell Phone Spy Call Recording iyakwazi ukurekhoda kokubili izingcingo ezingenayo kanye aphumayo buthule. Zonke ukuqoshwa basuke ngekhodi kudivayisi yakho bese okubhalwe ngezindlela ifayela MP3. The call recording file is uploaded using a secure channel to Exactspy server allowing you to listen it from your control panel. Le Call Hambayo amafayela Ukuqopha ziya ngekhodi besebenzisa iphasiwedi yakho yomsebenzisi kanjalo kuphela uzokwazi ukulalela kwabo.
ExactSpy allows you to remotely record calls made from or received by your target device. Uma udinga Spy Call mibhalo noma Hack call Somone okuqoshiwe, ExactSpy iyona engcono Choise yakho.
With ExactSpy ungakwazi alobe yimuphi call wenza noma kusuka efonini Target.
Rekhoda yonke namakholi angenayo naphumayo
Record call noma ezivela oxhumana nabo abathile kuphela
Zonke okuqoshiwe ayalayishwa ku Dashboard yakho online
Thwebula okuqoshiwe noma ulalele ngokuqondile Dashboard
Kungani You Need ExactSpy-Cell Phone Spy Call Recording
Ingabe ayinandaba ngubani indodakazi yakho esakhula kuwukwenza izinhlelo nge? Ingabe unayo abasebenzi kudingeka ukuqapha? Mhlawumbe oshade naye wenza osolisayo too, futhi wena nje ngeke sekungaphezu. Uma ufuna ukwazi kahle lokho kokuba wathi kulabo izingcingo uma engekho eduze, nge ExactSpy Manje unga. Simply login to your ExactSpy Dashboard to either download or listen to any call made to or from your Target phone. Ungase futhi ukurekhoda izingcingo nabantu oxhumana nabo abathile kuphela uma ufisa, ngisho bethola incwadi osheshayo lapho omunye kulaba exhuma.
Kunezenzakalo eziningi lapho ungase uthole nokusola indlela yokuziphatha eyingozi noma okungafuneki ekhaya noma emsebenzini. By ukuqopha izingcingo ExactSpy uyothola ubufakazi ezidingekayo ukuze bakwazi ezibhekene nesimo ngendlela eyakhayo.
ExactSpy-Cell Phone Spy Call Recording ikunika ukulawula ngokuphelele call ukuqoshwa on the phone target cell
Ukurekhoda izingcingo kunengqondo yezizathu eziningana. Kukhona ukuhambisana, ukuvikelwa icala, ukuqeqeshwa, ukuqapha, futhi izwi feedback ikhasimende lapho okuqoshiwe kuthiwa uhamba nesithandwa nge software inkulumo analytics.
Kungani lokhu kuyasiza?
Uma libhala zonke izingcingo zakho uzokwazi ukulalela idatha ezibalulekile esizayo, lokhu ukuqoshwa zingaba usizo ukufakazela iqiniso ezinye uma kukhona ezisongela wena isibonelo.
Ucingo Recording usebenzisa izinyonga ukuze encode okulalelwayo kuya amafayela MP3. Izinyonga iwumthombo ovulekile software mahhala ngaphansi kwelayisensi LGPL futhi ungazithola lapha: www.mp3dev.org